Mai Chibwe VekwaZimuto: Mwana anovata nomubereki
Kunyika dzese kune vanhu vanetsika yokuvata nomubereki toti mwanakomana namai vake kana kuti mwanasikana nababa vake. Kune vamwe vanotosvika pakuzvarisana vana kana kuroorana nokugara somurume nomukadzi. Inyaya isingabvumidzwi munyika dzese iyi asi zvinongoitika.
Zvinohi kuMwenezi kwakaita mai vakada chose kuroorana nomwana wavo wavakazvara. Iyewo mwana akataridza chose kuda kuvata namai vake. Ndisingazivi kuti anokwanisa here kuti Mhamha, bvisai bhurugwa kana kuti mhamha fongorai . Hameno kuti imi vanhurume munozvionawo sei asi ini sokuona kwangu nyaya yakadaro haaiti hayo. Mai kutoudza mwana kuti haa nhasi wange uchinaka zvisingaite. Bodo. Ruzhinji gwedu tinoona zvichirema asi variko vanozviita. Takahwa nyaya yake uyu Betty Mbereko weMasvingo.
Apa tiri kuti zvinohwisisika kuti mubereki atange kubata mwana zvisirizvo nokuti mwana munhu mudiki. Chisingahwisisiki ndechokuti mubereki otanga kufunga zvakadai mwana ava munhu mukuru, mwana obva atobvumawo kuvata nomubereki. Kusvika pakutopinda muBEDROOM mamai kana kuti mababa. Zvinofamba sei mufungwa dzomwana uyu?
Munyika zhinji zvikazikamwa mese munosungwa nenyaya yokuvatana pachenyu vanhu vemhuri. Hazvibvumudzwi. Zvokuti sei zvisingabvumidzwi ndeimwewo nyaya asi kungoti tikatarisa nyika dzakawanda chose tinoona kuti hazvibvumidzwi. Ku America kune mamwe ma STATE azvinobvumidzwa asi isiri nyaya yokuti vanoti itai. Nyaya ndeyokuti mukaita hamsungwi.
Nyaya yedu yoenderera mberi yakadai. Mwanakomana, chii chinoitika mufungwa make kana achihwa mai vake vachichemerera achivarhoja iye? Ko mwana sikanawo chii chinoitika mufungwa yake achiona chombo chababa chakati twii kuti iye atambe nacho? Zvisiri zvokuti vana ava vakatanga kuita izvi vari vanana asi vava vanhu vakuru?
Tochiwedzerazve zviitiko zvedzimwe dzenyika nyika dziya dzatati zvinosungisa. Pamakore akati wandayi apfuura tinoona kuti nyika dzawanda dzava kuudza vanhu kuti munobvumidzwa kuroorana pachenyu varume mese kana kuti vakadzi mese. Varume kare vaimbosungwa kana vakazikamwa kuti vanopinzana zvombo kumashure vachipanana urumeko sevari mujeri. Kuvakadzi zvaionekwa sokuti hapana chokusungira munhu nokuti hapana chapinzwa mumunhu saka kana muchida kungokwizana zvitubu kwizanai henyu isu tongosekeka kuti muri mapenzi.
Mitemo iyi yaifungwa kazhinji nevanhurume saka vaaitira kuzviPROTECTA ivo kuti vamwe varume sasafunga kuita chingochani pavari. Zviaonekwa sokuti chingochanikadzi hachina chachingakanganisa pamunhukadzi.
Hino mazuvano toona kuti varume voroorana, vakadziwo voroorana asi hakuna ane basa nazvo. Asi tichiri panyaya yokuti kana ukada kuvata nomwana wako ava munhu abva zera mese munosungwa. Chinosungisa ipapo chii?
Toti mai nomwana vanogarorhojana, Mai vari pamapiritsi mwana anoshandisa makondhomu. Chingahi chakaipapo kupffura varume vaviri vemhuri dzakasiyana kuvata vese chii? Pese hapana mimba inoitika saka hapazvagwi mwana. Chii chakaipa kupfuura chimwe. Mwana ndewako uye mese makura munodanana. Ndiri kuona sokuti tikaita mamwe makore mashanu, mibvunzo iyi ichaendeswa kuCOURT zvokuti tichahwa COURT yoti regai vabereki vavate nevana vavo kana vana vabva zera.
Izvozvo ku AUSTRALIA vari kugadzirira kuvhota kuti nochani/ngochanikadzi dziroorane kana dzichida. Vachiri kuitirana nharo aro kuno kuEUROPE ne America nedzimwe nyika dzakawanda chero dzechi ISLAM dzakaita se IRAN zvakabvumidzwa kare. Pasara chete pasingabvumidzi ndipapo pemwana nomubereki. Asi tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vari kutozviita. Vamwe vari kutobuda mumanyuzipepa vachizvitaurira vega kuti heee ndinoda kuroogwa nababa, ndinoda kuroora mai.
Tiri kutaura mubereki wekubereka chaiye kwete mainini kana maiguru kana babamunini kana babamukuru. Chaiye akakubereka. Asi mubvunzo woti iwo kana nyika yako ichbvumidza murume kufongoresa umwe murume, chinhu change chisingabvumidzwi nguva shoma yapfuura, chiri kuitisa kuti varambe vachirambidza vanhu kuvata nevabereki vavo chii.
Ngatitarise nyaya dzinoitisa munhu ade kuvata nomubereki. Totanga nemagarire evanhu mumadhorobha kana kuti mumapurazi. Mumadhorobha dzimba idiki zvokuti munokwanisa kugarovata pedo napedo. Unokwanisa kuhwa mubereki wako achizvibatabata achinakigwa, iyewo achihwa mwana achidaro. Umwe wevabereki anokwanisa kushaika kana kurambana pamba posara pane umwe chete. Munokwanisa kuva EMOTIONALLY VERY CLOSE zvokuti umwe musi munoerekana mabatana zvisitangwa zvotanga.
Kumapuraziwo vanhu vanogara vakatarangana zvokuti umwe mubereki akafa pamba pane vana vakura zvinokwanisika kuti mwana mukuru atanga mabasa ami kana kuti ababa, zvozoonekwa kuti uya muereki asara iota zvinhu nomwana zvasingafaniri. Asi kana ariwo maitire evanhu, chero tikati vanopenga kana kuti Havana unhu, hurumende inei nazvo? Voroorana here kana kuti vongoita zvechivande sevari kuhura?
Tongai tihwe vanotonga. UNHU hwenyika zhinji hwava kutsanangugwa zvakasiya nezvazvange zviri. Kuvata nomuereki ndicho chinhi chega chasara chichiri kuramidzwa panyaya dzokuvatana.
Kana uchihwa kuti une ruchiva gweZEMO pamubereki kana kuti pamwana wako, enda unotsvaka COUNSELLING uite nguva uchizama kuhwisisa kuti chakakanganisika mufungwa dzako chii. Usarega zvinhu zvakaita zvazvakaita. Kudanana nomwana kana mubereki chinhu chinokubvisa unhu panavanhu. Zvinokuderedza chimiro. Mibvunzo yese yatabvunza, chokwadi ndechokuti hatizivi mhinduro dzakakwana. Pari zvino mhomho yese inoti kuvata nomwana kana mubereki chinhu chakaipa.
Posted by Mai E Chibwe at 12:52